T-900 Yekutakura Wiricheya Inorema Duty inosvika makumi maviri neshanu ″ Kumashure mavhiri | Karman
×	 S-ERGO 115 TP - 22	1 × $670.00
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Bariatric Wiricheya
View ngoro "S-ERGO 115 TP - 22" yakawedzerwa kungoro yako.
T-900 Yekutakura Wiricheya Bariatric Heavy Duty Wide Kusvika 22 ″
Iyi T-920 & T-922 Deluxe BariatricTransport Wheelchair inowedzera kumutsara wedu wesimba rakakwira maviri maviri echinjiso brace. Inotsigira kusvika kuma450 lbs. nekuda kwesimbi yaro yakasimbiswa. Iri rinopfuura basa rinorema, rugare rwayo rwepfungwa kuziva kusimba kwewiricheya iripo kumira muyedzo wenguva. Yechokwadi inorema basa remawiricheya inotanga pa 20 - upamhi uye isu tinotove ne 22 - sarudzo.
Zvimwe zvezvinhu zvikuru zvaunowana pane ino unit zvinosanganisira armrestable armrest uye swing-away footrest zvichiita kuti zvive nyore kupinza mukati nekubuda pawiricheya uye nyore kuwana matafura uye kumwe kushandiswa kweichi chiitiko. Ichi chikamu chine yakanyatsogadzirwa nylon upholstery iri nyore kupeta. Unogona kuripeta mumasekondi; zvichiita kuti ive sarudzo hombe kune ari kuenda mushandisi. Iyo nyaradzo inonyatso kuvakwa muchigaro ichi ichipa yezuva rese nyaradzo uye tsika inochinjika tsoka.
* Yekukurumidza ngarava Checkout, edu akajairika base mamodheru anozotumirwa mu20 ″ chigaro upamhi. Iwe unogona zvakare kugadzirisa pane inodonhedza menyu pazasi.
hapana 20 ″ x18 ″ 22 ″ x18 ″ (+ $ 100.00)
hapana 20 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 229.00)	20 ″ x17 ″ Chigaro cheFoam Cushion (+ $ 82.00)	22 ″ x17 ″ Chigaro cheFoam Cushion (+ $ 89.00)	20 ″ x17 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 108.00)	22 ″ x17 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 128.00)
hapana 20 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Kudzoka Kusheni (+ $ 199.00)	20 "Wide Chigaro Furo Kudzoka Cushion (+ $ 98.00)
20 ″ -22 "Width Yakapetwa Musoro Headrest (+$174.00)
T-920 & T-922 - 40 lbs huwandu
SKU: T-920 Categories: Bariatric Wiricheya, Kutakura Mawiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Zvingangoita T-920 uye T-922
ichi wiricheya Muenzaniso: T-920 uye T-922 ndeye deluxe simbi bariatric transport chair izvo zvinosanganisira maviri emuchinjikwa mabara ekuwedzera rutsigiro. Zvakare zvinoratidzira kusvetuka kure footrest w / chitsitsinho chiuno uye manyore kukiya mabhureki.
T-920 & T-922 vane giredhi repamusoro murazvo unodzora, inofema nylon upholstery inotenderera ichi transport chair iyo inogara mukurumari uye kutsigirwa
Yakapetwa inowoneka dhesiki kureba armrests
20 ”kana 22 ″ chigaro chine takura zvishwe zvekutakura zviri nyore
Manual zvechizarira mabhureki
450 Kurema Unyanzvi
Chimiro Ruvara: Tsvuku
Dual Cross Mabhawa
20 "x 18" kana 22 "x 18" Chigaro Upamhi
Chigaro Kureba 20 padiki., 22 padiki.
Chigaro Kudzika 18 padiki.
Chigaro Kureba 21 padiki.
Kureba Kureba 16 padiki.
Kunopindirana Kureba 36 padiki.
Pakazara Hupamhi Hupamhi 25 padiki., 27 padiki.
Kurema Pasina Riggings Makirogiramu makumi mana, makumi mana nemakumi mana.
Kurema Kugona 450 lbs.
T-900 Kutakura Wiricheya UPC #
KM-5000-TP - 33 lbs
KM-5000 - 36 lbs
30 × 11 × 36 mukati
35.1 lbs kana zvimwe
20 "Chigaro, 22 "Chigaro
Tranzit Go - Magetsi
VIP2-TR - makirogiramu makumi mana nematatu
MVP-502-TP - 34 lbs
KN-922W - 49 lbs